Home News Jid-gooyooyin laga qaadaayo qeeybo ka mid ah Gobolka Sh/hoose
Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay faah faahin ka bixiyeen isbaarooyin mararka qaarkood dadka ku nool Gobolkaasi lagu dhibaateeyo.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka Maaliyadda ee Gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi fitaax Xaaji Cabdulle ayaa sheegay in isbaarooyinka dadka dhiganaya aysan aheyn reer Shabeellaha Hoose.
Waxa uu sheegay in dad ku yimid Magac Ciidan,isla markaana ka yimid Gobolo kale ay yihiin kuwa isbaarooyinka ay u yaallaan degmooyin ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in dadka ku nool Gobolka Shabeellaha Hoose ay yihiin dad badi aan dhigan isbaarooyinka balse sida uu sheegay ay yihiin dad ka yimid deegaano kale oo dadka dhibaateynaya.
Hadalka Guddoomiye ku xigeenka dhanka Maaliyadda ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo aadaya xilli Shacabka qaarkood ay ka cabanayaan isbaarooyin la soo dhigay deegaano ka tirsan gobolkaas.
Previous articleQaraxyo loo Adeegsan Karo feekoon iy Mooto Bajaajyo oo laga Cabsi qabo in ay ka dhacaan Magaalada Muqdisho Iyo Cabsi Taagan!
Next articleGen Indha-qarshe oo Digniin u Diray Dhalinyarada Al-shabaab ka Barbar Dagaalameeyso!!
Xukuumada oo Bilowday Qorsho ay Ku Raali Galineyso Xubnaha Barlamanka Balamaha...